Minnesota Secretary Of State - Codbixinta Maalinta Doorashada (Election Day voting)
Boggan, waxaad ka baranaysaa meeshii aad ka codayn lahayd, waxaad soo qaadan lahayd, sidii aad caawinaad u heli lahayd iyo waxa xuquuqdaadu tahay codbixiye ahaan.
Goobaha iyo saacadaha codbixinada
Hel meesha aad ka codaynayso. Goobaha codbixinta badankoodu waxay furan yihiin laga bilaabo 7da subaxnimo ilaa 8da fiidnimo.
Waxaad soo qaadanayso
Haddii aad ka diiwaangashan tahay in aad ka codayso cinwaankaaga hadda, uma baahnid in aad la timaadid aqoonsi. Haddii aad u baahan tahay in aad isdiiwaangeliso ama diiwaangelintaadii hore wax ka beddeshid, waad u baahan doontaa in aad tusto caddayn deganaanshahaaga intaadan codayn.
Raadi caawinaad si aad u codayso
Waxaa jira siyaabo badan oo aad caawinaad ku heli kartid markaad codaynayso. Waxaad soo kaxaysan kartaa qof ku caawina, waxaa weydiin kartaa garsooraha doorashada, waxaad isticmaali kartaa mishiin si uu kuugu caawino in aad calaamasayso warqaddaada codbixinta ama waxaad xittaa kartaa in aad codayso adigoo baabuurkaaga ku jira.
caawinaad ka imanaysa qoyska, asxaabta ama deriska
Waxaad soo kaxaysan kartaa qof qoyska ka tirsan, saaxiib, deris, ama ciddii aad doonto in ay ku caawinaan si aad u codayso. Waxaa kaliya oo aadan caawinaad ka raadin karin waa looshaqeeyahaaga ama ururkaaga ama qof xafiis u sharaxan.
Qofka ku caawinayaa wuxuu kaa caawini karaa dhammaan qaybaha kala duwan ee helinka ama nadaamka codbixinta, oo ay ku jirto waabta codbixinta gudaheeda. Haseyeeshee qofka ku caawinayi waxa kaliya oo uu isagu u calaamadayn karaa warqadda codbixinta ilaa iyo saddex codbixiye doorashadiiba.
Dadka ku caawinaya looma ogola in ay saamayn ku yeeshaan codkaaga ama ay dadka kale u sheegaan sida aad u codayso.
Dibad ka codayn
Haddii aadan si fudud baabuurkaaga uga bixi karin si aad u gasho goobta codbixinta, waxaad codsan kartaa in debedda laguugu keeno warqadda codaynta. Tan waxaa loogu yeeraa dibad ka codayn.
Laba garsoore doorasho oo ka kala socda xisbiyo waaweyn oo kala duwan ayaa baabuurkaaga kuugu keenaya warqadda codaynta. Haddii aad u baahan tahay in aad isdiiwaangelisid ama aad wax ka beddeshid diiwaangelintaadii hore, waxay kaloo soo raacinayaan arji.
Marka aad dhammaysato codaynta, garsoorayaasha doorashada ayaa warqaddaada codbixinta gudaha kuu gaynaya oo ku riddaya sanduukha codbixinta.
Caawinaad ka imanaysa mishiinka calaamadeeya warqadda codbixitan
Goobaha codbixinta badankoodu waxaa yaal mishiin calaamadayn kara warqadda codbixinta. Waxay ku siinaysaa asturnaan haddii aadan karin (ama aad doorato in aadan) ku codayn adigoo qalin isticmaalaya.
Mishiinku wuxuu leeyahay shaashad aad ka arkayso warqadda codbixinta oo far waaweyn ku qoran ama waxa ku qoran aad si fiican uga arki kartid. Wuxuu kaloo samayn karaa in uu kuu akhriyo warqadda codbixinta markaad samaacadaha dhegaha gashato.
Waxaad warqaddaada codbixinta buuxin kartaa adigoo isticmaalaya Braille keypad, shaashadda taabanaya ama qalab afka loo adeegsado si kombutarka aad wax ugu qorto. Ka dib markaad doorato qalabka aad rabto, wuxuu daabacayaa warqadda codbixinta oo dhammaystiran.
Caawinaadda aad ka heli kartid garsoorayaasha doorashada
Garsoorayaasha doorashadu waxay meesha u joogaan in ay ku caawinaan sidii aad u mari lahayd nidaamka doorashada min bilaw ilaa dhammaad.
Haddii aad u baahan tahay caawinaad si aad u calaamadayso warqaddaada codbixinta, waxaa ku caawini karaa laba garsoore doorasho oo kala socda xisbiyo kala duwan. looma ogola in ay saamayn ku yeeshaan waxaad dooranayso ama ay dadka kale u sheegaan sida aad u codaysay.
Shaqada oo lagaa fasaxo si aad u codayso
Waxaad xaq u leedahay in shaqada lagaa faxaso si aad u codayso adiga oo aan lagaa goynayn lacag, fasaxa gaarka ah, ama fasax aad xaq u yeelatay dhammaan doorashooyinka gobolka iyo federaalka, iyo dhammaan doorashooyinka deegaanka ee leh jadwal joogto ah.
Looshaqeeyahaaga waxaa waajib ku ah in uu bixiyo waqtiga aad u baahan tahay in aad ku codayso, haddii waqtigaasu ku soo aado jadwalkaaga shaqada. Looshaqeeyahaagu shuruud kaagama dhigi karo in aad isticmaasho fasaxa gaarka ah, ama fasax aad xaq u yeelatay (eeg Xeerarka Minnesota 204C.04 iyo 204C.08 Subd.1d).
Isticmaal oo kaliya waqtiga aad u baahan tahay in aad ku codayso oo shaqadaada aad.
Looshaqeeyahaagu si toos ah ama si dadbanba kuuguma diidi karo, xadidi karo, ama faragelin kuma samayn karo xaqqan, oo ay ku jirto in aad codaysid waqtiga aad doorato.
Looshaqeeyahaagu waa ku waydiin karaa in aad u sheegto marka aad tegaysid, iyo in uu waydiisto in shaqaaluhu isuduwaan waqtigooda si maqnaanshahoodu aanu u carqaladayn hab socodka shaqada.
Waxaad nuqul warqaddan ah siin kartaa looshaqeeyahaaga, waxay u faahfaahinaysa xaqqa aad u leedahay in shaqada lagaa fasaxo si aad u codayso.
Looshaqeeyaha sharcigan ku xadgudba waxaa lagu helayaa dembi fudud. Wixii cabashooyin ah ee ka imanaya shaqaalaha waa in loo gudbiyaa xeerilaaliyaha degmada.
Maadaama aad tahay codeeye ah reer Minnesota, waxaad leedahay xuquuq badan—ogow xuquuqdaadu waxa ay tahay!
In aad shaqada waqti ka qaadatid si aad u codaysid
Waxaad xaq u leedhaay in aad fasax shaqada ka qaadatid adiga oo aan lagaa goynayn lacag, fasaxa gaarka ah, ama fasax aad xaq u yeelatay.
In aad codaysid haddii aad safka ku jirtid 8da fiidnimo.
Waxaad xaq u leedhay in aad codaysid haddii aad safka ku jirtid waqti kasta oo ka horeeya 8da fiidnimo.
In aad isdiiwaangelisid Maalinta Doorashada
Waxaad xaq u leedahay in Maalinta Doorashada aad isdiiwaangelisid si aad u codaysid haddii aad muujin kartid caddaynta loo baahan yahay ee deegaanka.
In aad hadal ku saxiixdid
Waxaad xaq u leedahay in aad hadal ku caddaysid qofka aad tahay oo aad qof kale waydiisato in uu adiga kuu saxiixo haddii magacaaga aadan wax ku saxiixi karin.
In aad caawinaad waydiisatid
Waxaad xaq u leedahay in aad qof kasta caawimaad waydiisatid, marka laga reebo qof wakiil u ah looshaqeeyahaaga ama urur, ama musharax.
In aad goobta codbixinta caruur keeni kartid
Waxaad xaq u leedhay in aad caruurtaada keento si ay kuula codeeyaan.
In aad codaysid ka dib markaad dhammaysato xukun dembi culus
Waad codayn kartaa ka dib markaad dhammaysato dhammaan qaybaha xukunkaaga, oo ay ka mid yihiin tijaabo dembiile, siidayn waqtigii oo aan la gaarin, ama shuruudo kale sida magdhaw.
In aad codaysid haddii aad weli(qof kaa mas'uul ah) hoos joogtid
Waxaad xaq u leedahay in aad codaysid haddii aad weli hoos joogtid, haddii aan garsoore kaala noqon xaqqa aad u leedahay codbixinta.
In aad codaysid adiga oo aan codkaaga cidi saamayn ku yeelan
Waxaad xaq u leedahay in aad codaysid adiga oo aan cid joogta goobta codayntu wax saamayn ah ku yeelan codkaaga.
In laguu beddelo warqadda codbixinta
Waxaad xaq u leedahay in laguu beddelo warqadda codbixinta haddii aad qalad ku samaysay warqadda codbixinta intaadan sanduukha ku ridin.
In aad cabasho gudbiso
Waxaad xaq u leedahay in aad cabasho qoraal ah u gudbiso goobtaada codbixinta haddii aadan ku faraxsanayn qaabka doorashada loo maamulayo.
In aad la timaadid muunad/tusaale ah warqadda doorashada
Waxaad xaq u leedahay in aad muunad/tusaale ah warqadda codbixinta la gashid waabta codbixinta.
In aad la timaadid xeerka xuquuqda codbixiyaha
Waxaad xaq u leedahay in aad nuqul ah Xeerka Xuquuqda Codbixiyaha la gashid waabta codbixinta (Xeerka Minnesota 204C.08 qayb-hoosaad.1d).